5 भियना देखि सर्वश्रेष्ठ दिन यात्राहरू अस्ट्रिया आविष्कार गर्न | एक ट्रेन सेव
घर > यात्रा युरोप >5भियना देखि सर्वश्रेष्ठ दिन यात्राहरू अस्ट्रिया आविष्कार गर्न
भियना एक लोकप्रिय छ यात्रा गन्तव्य, मुख्यतया किनभने यो भव्य छ र यो एक सहर हो जुनसँग प्रस्तावको लागि धेरै छ
तथापि, यो पनि धेरै रोचक स्थानहरू घेरिएको शहर छ. तपाईं भियना देखि एक दिन यात्राको लागि समय छ भने, तपाईं आफ्नो ध्यान बारी गर्नुपर्छ? हामीले केहि सुझावहरू पाएका छौं जुन पक्कै हुनेछ छुट्टी बनाउनुहोस् अस्ट्रिया थप बहुमुखी मा. यसबाहेक, के तपाईं छैन अन्यथा भ्रमण गर्न समय हुन सक्छ केही स्थानहरू हेर्न प्राप्त गर्न सक्छन्. हाम्रो सूची मा एक नजर छ5तपाईंलाई रुचि हुन सक्छ भियना देखि सर्वश्रेष्ठ दिन यात्राहरू अस्ट्रिया आविष्कार गर्न!
1. अस्ट्रिया पत्ता लगाउनुहोस् – Hallstatt
किनभने यो अन्वेषण गर्न निकै लामो लाग्न गर्दैन Hallstatt भियना देखि एक दिन यात्राको लागि उत्तम छ, र यो बिल्कुल आश्चर्यजनक छ. तथापि, यदी तिमी एक रेल लिएर Hallstatt गर्न, प्राप्त बिहान सबेरै जाँदै, त्यसैले तपाईं पर्याप्त समय हुनेछ. यो भियना देखि सबैभन्दा लामो दिन यात्राको मध्ये एक छ, र राम्रो योजना आवश्यक छ. तर, एक पटक तपाईं त्यहाँ, त्यहाँ रमाइलो गर्न प्रशस्त छ. Hikes, तस्वीर लिइरहेको, वा सबै उत्कृष्ट छनोटहरू हिउँदमा बरफ गुफाहरु भ्रमण हो.
सल्जबर्ग सजिलै छ रेल पहुँच भियना देखि, र यो सबैभन्दा आकर्षक दिन यात्राको मध्ये एक छ. उदाहरण को रुपमा, सल्जबर्ग मा, तपाईं आफ्नो भव्य बारोकी भवनहरु संग ऐतिहासिक शहर को केन्द्र अन्वेषण गर्न. त्यसपछि Hobensalzburg किल्ला छ, जो शहर को सबै भन्दा राम्रो दृश्य प्रदान गर्नेछ.
यसबाहेक, तपाईं यात्रा गर्न सक्छ Mozart घर, अब एक संग्रहालय कुराको प्रशस्त संग प्रसिद्ध संगीतकार सिक्न. अझ बढी, तपाईं उहाँले बप्तिस्मा जहाँ सल्जबर्ग गिर्जाघर भ्रमण सक्छ.
ग्राज सल्जबर्ग गाडिहरु गर्न
लिन्ज सल्जबर्ग गाडिहरु गर्न
3. एक दिन यात्रा Lainzer वन्यजन्तु पार्क गर्न
तपाईं एक दिन यात्राको लागि शहर देखि टाढा प्राप्त गर्न खोजिरहेको छ भने, विकल्प प्रशस्त छन्. ती मध्ये एक लेन्जर हो वन्यजीव पार्क, जो तपाईं भियना वुड्स पाउन सक्नुहुन्छ. Its beautiful nature with ancient oak and birch trees will make you feel like you have stepped intoafairytale.
विगतमा, यो स्थान धेरै शासकहरुले एक मनपर्ने शिकार haunt थियो. आज, तपाईं शिकार गर्न सक्दैन, तर तपाईं आनन्द उठाउन सक्छौं सुन्दर पैदल यात्रा ट्रेल्स साथै Hubertuswarte वेधशाला देखि दृश्यको.
4. Laxenburg क्यासल
बस एक 40 भियना देखि मिनेट यात्रा, तपाईं यो ताल मणि पाउन सक्नुहुन्छ - Laxenburg क्यासल. स्थान एक पटक बजार सहरमा थियो, तर अब यो Viennas आकर्षण गर्न एक सुरम्य साथै रूपमा सेवा गर्दैछन्. उदाहरण को रुपमा, तपाईं को एक आनन्द उठाउन सक्छौं यसको धेरै रेस्टुरेन्ट, sunlit क्षेत्रहरू र पनि ताल मा बाहिर पाल.
5. क्रस स्टोन क्यासल
भियना को वरपर मा, त्यहाँ एक राजसी छ मध्ययुगीन महल तपाईं खोजी गर्न सक्छ. Kreuzenstein जादुई Hogwarts धेरै यात्री सम्झाउँछ, किनभने यसको spiers र turrets को को. के थप छ, यो अनुपम प्रदान गर्दछ, लुभावनी दृश्य को भियना वुड्स र डेन्यूब को. यसबाहेक, को Leobendorf गाउँमा नजिक छ, जो आफ्नो दिन यात्रा मा तपाईं को लागि एक राम्रो स्टप हुन सक्छ.
यो दिन यात्राको आउँदा प्रस्ताव भियना छ सबै हेर्न तयार? कुनै पनि हाम्रो5भियना देखि सर्वश्रेष्ठ दिन यात्राहरू अस्ट्रिया आविष्कार गर्न, तपाईंको यात्रा यो मूल्य हुनेछ. आफ्नो छुट्टी रमाइलो गर्न तयार र निश्चित पुस्तक आफ्नो रेल टिकट समयमा!
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “5 भियना देखि सर्वश्रेष्ठ दिन यात्राहरू अस्ट्रिया आविष्कार गर्न” आफ्नो साइट मा? तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र बस यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-day-trips-from-vienna%2F%3Flang%3Dne- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#traveleurope डेट्रिप्स eurotrip रेल यात्रा travelaustria traveltips